DAREEMAHA DAAQADA EE DAAQA: SIDA AY U SHAQEYSO, SIDA LOO XIRO, SIDA LOO DOORTO - INFRASTRUCTURE
Mowers - Kuwani waa nidaamyo badan oo ka mid ah hawlaha beeraha iyo adeegyada dadwaynaha: dalagyada beeraha, goosashada, diyaarinta beeraha dhul-beereedka, beerashada beeraha iyo cawska guriga, beeraha cawska ee wadooyinka. Iyadoo loo eegayo waxqabadka sarreeya, fududeyn iyo kalsoonida naqshadeynta, kuwa ugu caansan waa qalabka nooca loo yaqaan "rotary-type types".
Ma taqaanaa? Qalabkii ugu horreeyay ee wax lagu qori jiray ayaa waxaa beeniyay warshadda ingiriisiga ee warshadda dharka tufaaxa Edwin Beard Bading. Waxa uu fikraddan ku soo rogay habka loogu talagalay xakameynta foornada ee duubka dharka.
Farsamaynta cutubkani waa mid fudud: on shaashadda birta ah (cant) dhowr dhejis ayaa lagu rakibay, daaqadaha waxaa jira dhowr mindhiciyaal lagu rakibo faashadaha (inta badan laga bilaabo 2 ilaa 8), kuwaas oo soo jiidaya oo jarjaraya cawska sida dhakada. Mindiyeyaasha waxaa laga sameeyaa biro adag. Maadaama dhismaha uu yahay mid sahlan, mashiinka noocan ah waa sahlan tahay in la joogteeyo, haddii loo baahdo, waxaa si madax banaan loo hagaajin karaa.
Waxaa jira dhowr kala-soocid ah. Iyadoo ku xiran habka barashada, waxay u qaybsan yihiin:
cawska oo qashin ah (oo si siman uga baxsan agagaarka beerta);
Marka loo eego qaabka isu-ururinta cagaf-beereedka, labo nooc oo qalab ayaa kala-duwan:
Waxaa suurtagal ah in meel kale oo ka mid ah nidaamka jarida ay la xiriirto cagaf-cagaf-saaraha ama motoblock: horay, dhinaca dambe ama gadaal. Waxaa intaa dheer, diyaargarowyo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa marka la isku xidho mishiinka korontada (PTO): suun, qalab, koofiyad, konik.
Noocyada naqshadeynta iyo mabda'a ah ee hawlgalada caws-gooyaha
Lifaaqyada loogu talagalay tractors ma laha qabashadooda gaarka ah, waxay yeelan kartaa hal ama dhowr taayirro taageero, laakiin qayb yar oo miisaanka ayaa loo wareejiyaa. Sidaa daraadeed, kuwani waa farsamooyinka miisaankoodu hooseeyo iyo waxqabadka. Qalabaha korantada ku wareegsan ayaa si fudud loogu xiri karaa cagaf-qaadaha isagoo isticmaalaya PTO oo sahlana inuu shaqeeyo oo uu sii wado. Cutubyadan waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo goobo yar yar, inkastoo loo isticmaali karo beeraha. Raaxo leh markaad ka shaqeyneyso dhul aan bannaanayn. Tani waa nooca caanaha ugu caansan ee dadka isticmaala mootooyinka iyo tareenada yaryar.
Sidee buu u shaqeeyaa shayga?
Qalabka wax lagu buufiyey wuxuu ka kooban yahay qaab shaxan, oo ku salaysan jilbaha pneumatic. Waxyaabaha la gooyo (sawirada leh mindiyo ku xiran) waxay kuxirantahay qaabka wareega leh ee rusheeyaha iyo farsamooyinka ciriiriga. Sidoo kale ku yaal shaxda ayaa ah xakamaynta xakameynta qaababka isdabajooga. Qodobka seddexaad ee taageerada waa fiiqida cirifka.
Ma taqaanaa? Qalabkii moobiilka wareega ee loo yaqaan 'macquul' waxaa lagu abuuray Australia horrantii qarnigii labaatanaad.
Unugyada kala-guurka ah ee la barbardhigay iyadoo la barbardhigay, sida caadiga ah, waxay leeyihiin awood weyn oo shaqeyn, waxay u baahan yihiin awood dheeri ah iyo, markaa, waxsoosaar badan. Waxaa loo isticmaalaa goobaha aag weyn.
Sida loo rakibo makhaayadaha
Ka hor inta aadan mashiinka ku rakibin tarbiilaha, hubi dhammaan xirmooyinka oo adkee dhamaan xabadaha. Kadibna, kiisaska ku rakibida lifaaqyada, ku xir xirmooyinka xayndaabta ciriiriga leh ee la xidhiidha fiilooyinka isku xira ee qalabka rakibay. Marka la rakibayo warshad wax lagu duugiyey, siday u kala horreeyaan, isticmaalaan farsamooyin la jarribo. Ka dibna ku xir xawaaraha (mishiinka baabuurka, qalab, suunka ama qalabka korontada, gawaarida hiddo-wadaha ah) ee PTO. Iyada oo ay joogaan qalabka korontada ee bixiya dhaqdhaqaaqa qumman oo uumiga ah, waxay ku xiran yihiin soo-saarka nidaamka hidda ee qaybta hoose.
Waa muhiim! Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in daboolka difaaca loo rakibo si ammaan ah oo loo hubiyo qaliinka aan shaqeynin.
Talooyin ku saabsan doorashada nooc
Marka aad dooranayso ubucle udubdhexaad u ah tarbiil ama motoblock, arrimaha soo socda waa in la tixgeliyaa:
noocyada dhirta: for dhirta goosashada leh stem adag qaro weyn, loo baahan yahay wadajir u awood badan;
xajmiga iyo gargaarka berrinka si loo farsameeyo: beeraha leh aag ballaadhan oo leh dhul adag, moodeelyo lagu riyooday ayaa la doorbidaa;
bartilmaameed: waxa fiican in la qaato qaab mulch ah inta lagu gudajiro maadada beeraha, iyo marka la saarayo cawska xayawaan - cawska lagu duubo;
qiimaha: Qalabka Cuntada Yurub, Mareykan ama Japan waa mid tayo sare leh, laakiin qaali ah; Sheyga Shiinaha waxaa laga iibsan karaa raqiis, laakiin tayada lama hubo; Waxyaabaha gudaha ah waxay leeyihiin meel dhexaad ah isla markaana waqti isku mid ah helitaanka faa'iido qaybood ah.
Waa muhiim! Ka taxaddir in joogitaanka damper oo ka ilaaliya aaladda jarjarista waxyeellada haddii dhacdada ay isku dhaceen dhagax ama lakab qaro weyn.
Beeraha gaarka loo leeyahay iyo kan yaryar, oo ay inta badan ka shaqeeyaan wadooyinka iyo tareenada yaryar, mashiinka Centaur-type LX2060 waa doorasho fiican. Qalabkani wuxuu ku xiran yahay adigoo isticmaalaya darawal la jajabiyay PTO, oo leh width of 80 cm iyo dhererka jarista 5 cm, taas oo ku haboon cawska. Wixii beeraha waaweyn waxay u baahan yihiin qalab wax soo saar badan. Tusaale ahaan, waxsoosaarayaasha wax soo saarka ee Polish-ka "Wirax", kuwaas oo ku haboon inay la xiriiraan qalabka MTZ, "Xingtai", "Jinma" iyo kuwo kale.
Qalabyada mashiinka MTZ-80 iyo MTZ-82 ayaa ku haboon. Jarinta cawska waxay qaadeen cajaladaha, kuwaas oo ah mindiyo. Dariiqyada waxay u dhaqaaqaan jihada ka duwan, cawska ayaa si siman loo gooyaa.
Kuwa ugu qalabaysan ee lagu shaqeynayo beeraha waaweyn waa kala duwanaansho, tusaale ahaan Krone EasyCut 3210 CRi. Waxay leeyihiin width of 3.14 m, waxay ku qalabaysan 5 raajicoon, cawska la isku qaboojiyey waxaa la dhigayaa duubo iyo leeyihiin awood ka 3.5 ilaa 4.0 ha / h. Tiknoolajiyada casriga ahi waxay si aad ah u fududayn kartaa nolosha beeralayda, iyo, dabcan, farsamada shaqada waa in aan la dayacin. Waxa ugu muhiimsan waa in la sameeyo xulasho sax ah oo ku saleysan baahida degdegga ah iyo fursadaha maaliyadeed ee hadda jira.